Misoro yeNhau, Muvhuro Kukadzi 19, 2018
Veruzhinji nhasi vapiwa mukana wekuonekana nemutungamiri weMDC-T, VaMorgan Tsvangirai, apo mutumbi wavo wapfuudzwa nepamuzinda webato reMDC-T paHarvest House, muHarare, ukazoendeswa kuFreedom Square.
KuBulawayo, vanhu vakawanda vabva kunzvimbo dziri kure mumatunhu eMatabeleland vatakurwa nemabhazi kuenda kuBuhera mudunhu reManicaland, uko mutungamiri weMDC-T VaMorgan Tsvangirai vari kuzovigwa mangwana.
Mutumbi waVaTsvangirai unosvika kuBuhera uko waendeswa nechikopokopo chehurumende.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti haione paine chakaipa pakubatsira kwehurumende parufu rwaVaTsvangirai sezvo vakambove mutungamiri wehurumende pane imwe nguva, ichiti VaTsvangirai vaikodzera kuvigwa kumarinda emagamba enyika, eHeroes’ Acre.
Sangano reHeal Zimbabwe ronyunyuta nekwarinoti kusashambadzwa zvakakwana kwemisangano yeNational Peace and Reconciliation Commission, iyo yatanga nhasi munyika, asi isina kupindwa nevanhu vakawanda.
Veruzhinji vochemachema kuti dai hurumende yaita kuti chirwere chegomarara chirapwe pasina muripo, uye kuti kuzvipatara zvese kusanganisira zvekumaruwa kuiswe michina inoongorora magomarara akasiyana-siyana.
Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders charova Chicken Inn nhasi masikati kuti chisangane neDynamos mufainari yeZimbabwe National Army Charity Shield.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm, tiri kutaura pamusoro pehurongwa hwekuradzikwa kwaVaTsvangirai, avo vari kutarisira kuradzikwa kumusha kwavo kuBuhera mangwana.
Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu. Endai pa link iyi: https://www.facebook.com/voa.shona/
Misoro yeNhau, Muvhuro, Kukadzi 19, 2018